I-Apple ikhupha i-Safari 14.1 ye-MacOS Mojave kunye neCatalina | Ndisuka mac
I-Apple ikhupha iSafari 14.1 yeMacOS Mojave kunye neCatalina
Nangona iApple ngoku ijolise kwimizamo yayo kwiBig Sur nakwinguqulelo elandelayo ye-macOS, ogama layo mhlawumbi siyalazi eWWDC 2021 ukuba ibanjwe ngoJuni, abo baseCupertino abalibalanga bonke abo basebenzisi bayaqhubeka nokusebenzisa iinguqulelo ezindala zeenkqubo zabo zokusebenza.
Ukusuka kwiseva zeCupertino, iApple ikhuphe iSafari 14.1, uguqulelo olukhoyo kubasebenzisi beMacOS Mojave kunye nabasebenzisi beMacOS Catalina kwaye kuyacetyiswa ukuba luhlaziywe njengoko lubandakanya Iimpawu ezahlukeneyo zokhuseleko ezichaphazela ikakhulu iWebKit.
Le ngxaki iye yafakwa namabala kuhlobo lwe-14.1 lweSafari ye-iOS 14.5, i-iPadOS 14.5, i-iOS 12.5.3 kunye neMacOS Big Sur 11.3.1, ke ukuba uhlaziyiwe kule nguqulo, awudingi ukuba nexhala ukuba nje isixhobo sakho sihlaziyiwe Inguqulelo.
Abasebenzisi beMac abanekhompyuter ilawulwa yi-MacOS Catalina okanye iMacOS Mojave Ungalufumana olu hlaziyo lufumanekayo ukuze ukhuphele ekukhethweni, kwicandelo lokuHlaziya iSoftware, okanye kwimenyu ye-Apple-Ukukhetha kweNkqubo.
Iinkcukacha zolu hlaziyo zezi zilandelayo:
Iyafumaneka: MacOS Catalina kunye neMacOS Mojave
Impembelelo: Ukulungiswa komxholo wewebhu kunokukhokelela ekusebenziseni ikhowudi ngokungahambelaniyo. U-Apple uyayazi ingxelo ebonisa ukuba lo mbandela usenokuxhatshazwa.
Inkcazo: Umba wenkohlakalo yenkumbulo uye waqwalaselwa ngophuculo lolawulo lukarhulumente.
I-CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme) kunye ne-zerokeeper kunye ne-bianliang evela kwi-360 ATA
Impembelelo: Ukulungiswa komxholo weWebhu kungakhokelela ekusebenziseni ikhowudi ngokungahambelaniyo. U-Apple uyayazi ingxelo ebonisa ukuba lo mbandela usenokuxhatshazwa.
Inkcazo: Ukuphuphuma kwenani elipheleleyo kwaqwalaselwa ngalo nokuphuculwa kokuqinisekiswa kokufaka.
I-CVE-2021-30663: umphandi ongaziwayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ikhupha iSafari 14.1 yeMacOS Mojave kunye neCatalina
Uthotho lwe-Echo 3 luza kubonisa umdlali weqonga uLuka Evans